Sheekada Guusha - PotatoSystem
Jun 26, 09:22
в Sheekada Guusha, Wararka Ruushka
Xariirka internetka ee joornaalka Nidaamka baradhada wuxuu ku dhawaaqay qayb cusub - Sheekada Guusha. Wuxuu kaloo soo jeedinayaa in dhammaan kaqeyb galayaasha baradhada iyo suuqa khudradda ay sheeko ku saabsan shirkadooda ka helaan - macaash ahaan.
Baradhadu iyo khudradda waxaa isku keenay shirkado badan oo adduunka ah. Qof ayaa ku hawlan abuurista wax soo saarka dalaga, qof ayaa ku hawlan sameynta, qof ayaa abuuraya noocyo cusub ama soosaara qalab gaar ah. Isla mar ahaantaana, qof walba wuxuu wajahaa dhibaatooyin, wuxuu sameeyaa go'aanno wuxuuna usii socdaa inuu horay u socdo. Badanaa dariiqaan - siyaabo badan, oo la mid ah kuwa kale isla mar ahaantaana aad u khaas ah - ayaa weli ah "gadaal dhacdooyinka" ee bogagga rasmiga ah ee buugaagta yar yar, in kasta oo sheeko “aan xayeysiin ah” oo ku saabsan shirkaddu ay xiiseynayso kumanaan kun oo qof, waxay ku dhiirrigelin kartaa oo taageeri kartaa dad badan, qaarna qaar laga yaabaa inay kaa caawiso ka fogaanshaha khaladaadka.
Waxaan ku martiqaadeynaa dhammaan kaqeybgalayaasha suuqa baradhada iyo khudradda inay gacan ka geystaan ​​abuuritaanka “taariikh” shirkada oo aan la wadaagno sheekooyinka shirkadahooda qeybta cusub ee buugga internetka ee joornaalka “Nidaamka baradhada” - “Guusha Sheekada”.
Qaabka sheekada ayaa noqon kara wax kasta (waraysi lala yeesho agaasimaha iyo / ama shaqaalaha; qormada; fiidiyaha; fiidiyowga; sawir muuqaal leh saxeexyo), waxa ugu weyni waa muuqaal aan rasmi ahayn, awooda lagu muujiyo qaabka ugu muhiimsan uguna xiisaha badan, qaabka hal abuurka.
Qalabka waxaa lagu daabacay si ku saleysan faa'iido la'aan. Macluumaadka hoyga waxaa loo diri karaa: ks@agrotradesystem.ru
Tags: taariikhda shirkaddaqaybta cusub ee joornaalka "Nidaamka baradhada"baradhada iyo suuqa khudradda